ဆီးချိုကို အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်် ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား – Askstyle
ဆီးချိုကို အမြစ်ပြတ်ပျောက်ကင်းစေတဲ့ ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်် ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်သား
#ဆီးချိုရောဂါဟာ ဆေးပညာအရပြောရရင် ငြိုငြိုငြင်ငြင်ကုရတဲ့ရောဂါထဲမှာ ပါတယ်။ ဆေးပညာက လွယ်လင့်တကူ ကုလို့ရတာ ရှိတယ်။ ကုရန် ခက်ခဲတယ်။ ပျောက်နိုင်ခဲတဲ့ရောဂါတွေထဲ ပါတယ်။ ကမ္ဘာနဲ့အဝန်း ဒီဆီးချိုရောရာဟာ ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လူကတော့ မသေဘူး၊ ဘဝသေတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဆီးချိုမှာ တိုက်ရိုက်ဒုက္ခပေးတာက အရေပြားတွေနဲ့ မျက်စိပဲ။ ဆီးချိုရှိတဲ့သူဟာ မျက်စိမှုန်လွယ်တယ်။ မျက်စိ တိမ်စွဲလွယ်တယ်။ ကွယ်လွယ်တယ်။ ဆီးချိုရှိတဲ့သူရဲ့ အရေပြားတွေဟာ ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး၊ ကုတ်ထားလို့ ညိုနေတာတို့၊ ညစ်နေတာတို့ ဖြစ်တတ်တယ်။ လူက အိပ်တယ်။ လက်က အိပ်လို့မရဘူးဆိုသလိုမျိုး အမြဲတမ်း ယားနေတတ်တယ်။
– #ဒါအပြင် ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာအနေနဲ့ ပြောရရင်
၁။ #သွေးချို၊ ဆီးချိုလာသူဟာ ဆီးအကြိမ်များပြီး မကြာခဏဆီး သွားတတ်တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့
ညအိပ်ချိန်မှာ သိသိသာသာ ပိုများလာတယ်။
၂။ #ဆီးအရောင် ပုံမမှန် ဖြစ်တယ်။ ပုံမှန် ဆီးဟာ ကောက်ရိုးနှစ်လို ဝါဖန့်ဖန့်။ ပုံမမှန်ကတော့ စိမ်းဖန့်ဖန့် ဝါကျင့်ကျင့်တွေလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ဆန်ဆေးရည်ကဲ့သို့ အနည်တွေဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။
၃။ #သွေးချို ဆီးချိုလာသူဟာ ဦးခေါင်းအုံလေးလာတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေပေါ်တယ်။ အမြဲလှဲနေလိုစိတ် ပေါ်တတ်တယ်။
၄။ #ချိုဆိမ့် ကြော်လှော်အစာကို ပိုပြီးစားလိုတဲ့ဆန္ဒ၊ မတည့်တာတွေ ချဉ်ခြင်းတပ်ပါတယ်။ အဲဒါကို ‘ဥစ္စာကံစောင့် အသက်ဉာဏ်စောင့် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဉာဏ်နဲ့စောင့်ကြည့်မှ သိရတယ်။
၅။ #အအိပ်, အစား သာမာန်ထက် ပိုများလာတယ်။
၆။ #အသားအရေက ပွယောင်းယောင်းနဲ့ အန်းတန်းတန်းကြီး ဖြစ်တတ်တယ်။ မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ရင် မျက်လုံးရဲ့အောက် (သို့မဟုတ်) အပေါ်မျက်ခမ်းမှာ အိအိအန်အန်ကြီး ဖြစ်တတ်တယ်။ အိပ်လိုက်လို့ ဖျာပေါ်မှာ ခေါင်းအုံးကနေ ခေါင်းကလွဲကျသွားရင် ပါးမှာဖျာအရာကြီး ထင်တတ်တယ်။ ခြေခုံလေးတွေ အန်းနေတတ်တယ်။
၇။ #ဆီးချိုသွေးချိုသမားဟာ အပူမခံနိုင်ပါ။ အမြဲ အိုက်စပ်တတ်တယ်။
၉။ #ဆီးချိုသမားဟာ အထူးသဖြင့် မျက်စိမှုန်ဝေသီပြီး တိမ်ဖြစ်လွယ်တယ်။ အသားအရေတွေ ယားယံတတ်တယ်။
၁၀။ #အရေပြားယားလို့ အနာတွေဖြစ်ရင် ပျောက်ခဲတယ်။ ကုတ်ရာကစပြီး ဝဲ၊ ဝဲနှင်းခူကဲ့သို့ နာတာရှည် ယားနာများ ဖြစ်တတ်တယ်။
၁၁။ #ခြေဖျား၊ လက်ဖျားတွေ ထုံကျဉ်လာတတ်တယ်
၁၂။ #အမျိုးသမီးများမှာ အထူးသဖြင့် ဆီးသွားလမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့ ယောနိမှာ ထူးထူးခြားခြား ယားယံနေတတ်တယ်။ ဆက်ပြောလျှင် လက္ခဏာတွေ အများကြီးပါ။
ဆီးချိုရောဂါ ဝေဒနာ အမြစ်​ပြတ်​သက်​သာ​ပျောက်​ကင်း​​စေတဲ့နည်း
​တစ်​ပတ်​( ၁)ကြိမ်​ (၃)ကြိမ်​စားပြီးပါက
ဆီးချို​ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို ပြန်​လည်​စမ်းသပ်​ရန်​ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ပျောက်​ကင်း​ကြောင်း ဖတ်​ရှုရသဖြင့်​ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေခြင်းဖြစ်​ပါသည်​
( နက္ခတ်​တ္ထ​ရောင်​ခြည်​မဂ္ဂဇင်း)ပါ ​ဆေးနည်း
ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်​သား ​ရောချက်​စားရုံသာ
(၃)ကြိမ်​မျှစားရုံဖြင့်​ ဆီးချိုလက်​​တွေ့သက်​သာ​ကြောင်း​တွေ့ရှိ၍ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ကြောင်း သတင်း​ကောင်းပါးအပ်​ပါသည်
အချိုဓာတ်​ပါရှိ​သောအစားအ​သောက်​များ . အထူးသဖြင့်​ သရက်​သီးမှည့်​ ပိန္နဲသီး ဒူးရင်း​ရှောက်​ချိုသီး လိ​မ္မော်​သီး ကျွဲ​ကောသီး ကြက်​​မောက်​သီးနှင့်​ ​ကောက်​ညှင်းများကို ​ရှောင်​ကြဉ်​ရပါမည်​
အမှတ် ၃၆၉( ဧပြီလ ၂၀၁၇)မှ ပြန်​လည်​ကူးယူတင်​ပြပါသည်​ ။
ကိုးကားးသွေးချို /ဆီးချို အကြောင်း သိကောင်းစရာ။ နက္ခတ်​တ္ထ​ရောင်​ခြည်​မဂ္ဂဇင်း
#ဆီးခြိုရောဂါဟာ ဆေးပညာအရပွောရရငျ ငွိုငွိုငွငျငွငျကုရတဲ့ရောဂါထဲမှာ ပါတယျ။ ဆေးပညာက လှယျလငျ့တကူ ကုလို့ရတာ ရှိတယျ။ ကုရနျ ခကျခဲတယျ။ ပြောကျနိုငျခဲတဲ့ရောဂါတှထေဲ ပါတယျ။ ကမ်ဘာနဲ့အဝနျး ဒီဆီးခြိုရောရာဟာ ခွိမျးခွောကျမှုတဈခုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လူကတော့ မသဘေူး၊ ဘဝသတေယျဆိုတာမြိုးပေါ့။
ဆီးခြိုမှာ တိုကျရိုကျဒုက်ခပေးတာက အရပွေားတှနေဲ့ မကျြစိပဲ။ ဆီးခြိုရှိတဲ့သူဟာ မကျြစိမှုနျလှယျတယျ။ မကျြစိ တိမျစှဲလှယျတယျ။ ကှယျလှယျတယျ။ ဆီးခြိုရှိတဲ့သူရဲ့ အရပွေားတှဟော ပုံမှနျမဟုတျတော့ဘူး၊ ကုတျထားလို့ ညိုနတောတို့၊ ညဈနတောတို့ ဖွဈတတျတယျ။ လူက အိပျတယျ။ လကျက အိပျလို့မရဘူးဆိုသလိုမြိုး အမွဲတမျး ယားနတေတျတယျ။
– #ဒါအပွငျ ထငျရှားတဲ့လက်ခဏာအနနေဲ့ ပွောရရငျ
၁။ #သှေးခြို၊ ဆီးခြိုလာသူဟာ ဆီးအကွိမျမြားပွီး မကွာခဏဆီး သှားတတျတယျ။ အထူးသဖွငျ့တော့
ညအိပျခြိနျမှာ သိသိသာသာ ပိုမြားလာတယျ။
၂။ #ဆီးအရောငျ ပုံမမှနျ ဖွဈတယျ။ ပုံမှနျ ဆီးဟာ ကောကျရိုးနှဈလို ဝါဖနျ့ဖနျ့။ ပုံမမှနျကတော့ စိမျးဖနျ့ဖနျ့ ဝါကငျြ့ကငျြ့တှလေညျး ဖွဈခငျြဖွဈမယျ။ ဆနျဆေးရညျကဲ့သို့ အနညျတှဖွေဈခငျြဖွဈမယျ။
၃။ #သှေးခြို ဆီးခြိုလာသူဟာ ဦးခေါငျးအုံလေးလာတတျတဲ့ လက်ခဏာတှပေျေါတယျ။ အမွဲလှဲနလေိုစိတျ ပျေါတတျတယျ။
၄။ #ခြိုဆိမျ့ ကွျောလှျောအစာကို ပိုပွီးစားလိုတဲ့ဆန်ဒ၊ မတညျ့တာတှေ ခဉျြခွငျးတပျပါတယျ။ အဲဒါကို ‘ဥစ်စာကံစောငျ့ အသကျဉာဏျစောငျ့ ဆိုတဲ့အတိုငျး ဉာဏျနဲ့စောငျ့ကွညျ့မှ သိရတယျ။
၅။ #အအိပျ, အစား သာမာနျထကျ ပိုမြားလာတယျ။
၆။ #အသားအရကေ ပှယောငျးယောငျးနဲ့ အနျးတနျးတနျးကွီး ဖွဈတတျတယျ။ မကျြနှာကိုကွညျ့လိုကျရငျ မကျြလုံးရဲ့အောကျ (သို့မဟုတျ) အပျေါမကျြခမျးမှာ အိအိအနျအနျကွီး ဖွဈတတျတယျ။ အိပျလိုကျလို့ ဖြာပျေါမှာ ခေါငျးအုံးကနေ ခေါငျးကလှဲကသြှားရငျ ပါးမှာဖြာအရာကွီး ထငျတတျတယျ။ ခွခေုံလေးတှေ အနျးနတေတျတယျ။
၇။ #ဆီးခြိုသှေးခြိုသမားဟာ အပူမခံနိုငျပါ။ အမွဲ အိုကျစပျတတျတယျ။
၉။ #ဆီးခြိုသမားဟာ အထူးသဖွငျ့ မကျြစိမှုနျဝသေီပွီး တိမျဖွဈလှယျတယျ။ အသားအရတှေေ ယားယံတတျတယျ။
၁၀။ #အရပွေားယားလို့ အနာတှဖွေဈရငျ ပြောကျခဲတယျ။ ကုတျရာကစပွီး ဝဲ၊ ဝဲနှငျးခူကဲ့သို့ နာတာရှညျ ယားနာမြား ဖွဈတတျတယျ။
၁၁။ #ခွဖြေား၊ လကျဖြားတှေ ထုံကဉျြလာတတျတယျ
၁၂။ #အမြိုးသမီးမြားမှာ အထူးသဖွငျ့ ဆီးသှားလမျးကွောငျးလို့ချေါတဲ့ ယောနိမှာ ထူးထူးခွားခွား ယားယံနတေတျတယျ။ ဆကျပွောလြှငျ လက်ခဏာတှေ အမြားကွီးပါ။
ဆီးခြိုရောဂါ ဝဒေနာ အမွဈပွတျသကျသာပြောကျကငျးစတေဲ့နညျး
တဈပတျ( ၁)ကွိမျ (၃)ကွိမျစားပွီးပါက
ဆီးခြိုရောဂါ အခွနေကေို ပွနျလညျစမျးသပျရနျ (၆)လခှဲ စှဲစားပါက အမွဈပွတျပြောကျကငျးကွောငျး ဖတျရှုရသဖွငျ့ ပွနျလညျမြှဝခွေငျးဖွဈပါသညျ
( နက်ခတျတ်ထရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျး)ပါ ဆေးနညျး
ငါးရံ့ (၁၀)ကပျြသား ရောခကျြစားရုံသာ
(၃)ကွိမျမြှစားရုံဖွငျ့ ဆီးခြိုလကျတှသေ့ကျသာကွောငျးတှရှေိ့၍ (၆)လခှဲ စှဲစားပါက အမွဈပွတျကွောငျး သတငျးကောငျးပါးအပျပါသညျ
အခြိုဓာတျပါရှိသောအစားအသောကျမြား . အထူးသဖွငျ့ သရကျသီးမှညျ့ ပိန်နဲသီး ဒူးရငျးရှောကျခြိုသီး လိမ်မျောသီး ကြှဲကောသီး ကွကျမောကျသီးနှငျ့ ကောကျညှငျးမြားကို ရှောငျကွဉျရပါမညျ
အမှတျ ၃၆၉( ဧပွီလ ၂၀၁၇)မှ ပွနျလညျကူးယူတငျပွပါသညျ ။
ကိုးကားးသှေးခြို /ဆီးခြို အကွောငျး သိကောငျးစရာ။ နက်ခတျတ်ထရောငျခွညျမဂ်ဂဇငျး